Mayelana NATHI - Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd.
I-Yiwu Mia Imp & Exp Co, Ltd. yasungulwa e-Yiwu city of China ngo-2007, ngemuva kweminyaka eyi-13 inesipiliyoni esitolo esikhulu, esitolo-esitolo, ema-wholesales kanye nabangenisi, umugqa womkhiqizo weMia Imp & Exp unwetshwe kancane kancane usuka ebucwebezeleni uye kwizesekeli zemfashini, izesekeli zezingane, izinto zezemidlalo, isitoreji sokuhamba, imikhiqizo yezocansi, Izinto ze-3C, izinto ze-DIY, izinto zephathi, izinto ezifuywayo nokunye okuthengiswayo okujwayelekile. Ikhuphuka ngesilinganiso esiphakathi kuka-10% ngonyaka iminyaka eyi-13 ilandelana, iMia Imp & Exp, enabasebenzi abangaphezu kwekhulu, ifinyelele ekuthengisweni kwaminyaka yonke kwezigidi ezingama-30 zamadola aseMelika, futhi yanikeza insizakalo eyodwa yokungenisa kanye nokuthekelisa ukuhweba kwamakhasimende ayi-1000 asekhaya nawamanye amazwe kuze kufike ku-2020.
Ukunqoba kulabo esincintisana nabo, iMia Imp & Exp inamahhovisi atholakala e-Yiwu, e-Hangzhou nase-Guangzhou, ehlola i-China ukuxhasa yonke imikhiqizo efanelekayo, ikhwalithi engcono kakhulu kanye namanani kumakhasimende ethu emhlabeni wonke. Ngokwakhiwa kwamamitha ayisikwele ayi-5000, iMia Imp & Exp isungule indawo yokugcina impahla engamamitha-skwele angama-3000 ukuqinisekisa ukulethwa okuguqukayo kanye ne-1000 square metres showroom ekhombisa izinto ezingaphezu kuka-50,000.
Ukufeza izidingo zokuqala zedizayini, sihlele iqembu lokwakha lochwepheshe elivela e-Italy naseJapan ukuze lihlale likwazi ukwenza izinto ezintsha. Ukufeza ukulawulwa kwekhwalithi, sihlele amaqembu anolwazi e-QA ne-QC ukugcina ukulawulwa kwekhwalithi, futhi sakha inkampani yethu yokuhlola iMenoch Inspection Co., Ltd ukuhlangabezana nezidingo zokulawulwa kwekhwalithi ephezulu.
Khonamanjalo, siqhubeka nokuya entwasahlobo / Autumn Canton fair kusukela ngo-2007, futhi siphinde siye Fairs ezikhethekile e-Hong Kong, e-USA, eJalimane, e-UK, Japan futhi ect. ukuthola amathuba amaningi okuhlangana namakhasimende ethu amadala ubuso nobuso, futhi singahlangana namakhasimende amasha amasha.
Umugqa Wethu Webhizinisi
Ukuthenga insizakalo ye-ejenti kulo lonke elaseChina
Ngamahhovisi e-Yiwu, e-Hangzhou nase-Guangzhou, ukuthola i-china ukuxhasa yonke imikhiqizo efanelekile, ikhwalithi engcono kanye namanani.
Inkampani yokuma okukodwa
Izesekeli zemfashini, izesekeli zezingane, izinto zezemidlalo, isitoreji sokuhamba, imikhiqizo yezocansi, izinto ze-3C, izinto ze-DIY, izinto zephathi, izinto ezifuywayo nokunye okuthengiswayo okujwayelekile.
Kubandakanya ukuhlolwa okugcwele, insizakalo yokupakisha, ukuhlolwa komuntu wesithathu nombiko wokuhlola waseShayina nowesiNgisi.
Yiwu Mia Imp & Isakhiwo se-Exp
Isakhiwo senhlangano yethu
■ Iminyaka engu-13 isipiliyoni esijwayelekile sokuhlinzeka ngempahla ngesitolo esikhulu, isitolo sezitolo, ama-wholesales nabangenisi.
■ TOP 10 Umthengisi wezinto ezingekho kokudla othumela ngaphandle e Yiwu. Okuhlangenwe nakho okucebile kokwakha ulayini wemikhiqizo emisha yamakhasimende.
■ Ngaphezu kwe Amafemu ayi-1000 aqondile.
■ 3000 square metres ishede.
■ Amamitha ayisikwele ayi-1000 i-an yangempelad online showroom in Yiwu, I-Hangzhou ne-Guangzhou okungaphezu kwe- Izinto ezingama-50,000.
■ Amamitha ayisikwele angama-500 indawo yokugcina impahla kubandakanya umtshina wenaliti nemishini yokuhlola.
■ Ochwepheshe Iqembu le-QA ne-QC ukuhlola yonke imikhiqizo ngaphambi kokuthunyelwa ngezinga le-AQL.
■ Insizakalo yezilimi eziningi kufaka phakathi i-English, Japanese, Spanish, German, French, Russian.
■ Ochwepheshe iqembu lokuklama kusuka e-Italy naseJapan ngemikhiqizo nokwakhiwa kwephakeji.
■ Ukuxhaswa okuqinile kwezezimali nomshuwalense.
■ Ukusekelwa kwemigomo yokukhokha eguqukayo.
■ Ujwayele imfuneko yokuhlolwa kwe-EU ne-USA, hlinzeka ngemikhiqizo enobungani be-ECO, ukubambisana isikhathi eside ne-SGS, TUV ne-BV.